के तपाईंको घाँटी दुख्ने समस्या छ ? घरमै गर्नुस उपचार....
मङ्सिर २७, २०७८ १६:४८:४५ • ३७६ पटक पढिएको
के तपाईंको घाटिमा हमेशा खराश रहन्छ ? यो मौशम परिवर्तनको असर् हो भनेर वा खान पानमा आएको परिवर्तनको असर् भनेर नबस्नुहोस् । गलाको खराश टन्सिल वा गलाको गम्भिर समस्या पनि हुन सक्छ ।
तुर्माखाँद गाउँपालिका करार कर्मचारी द्वारा अध्यक्ष बि.सी .लाई ज्ञापनपत्र पेश